နှစ်သိမ့် ဆုလေး စု – Hlataw.com
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နွေရာသီ တနင်္ဂနွေတစ်နေ့ကတော့ သူဟာနဲ့သူပုံမှန်လည်ပတ်လို့နေပါတယ်။ရွှေဘုံသာလမ်းက ဂျေဒိုးနပ် ဆိုင်တွင်းက အဲကွန်း ခန်းလေးထဲမှာကတော့ ကိုယ်စီကိုယ်စီအပူဒဏ်ကိုရှောင်လွှဲနေကြရင်း အအေးလေးသောက်လိုက် မုန့်လေးစားလိုက်နဲ့ အများစုကတော့အေးချမ်းနေကြပါတယ်။ဆိုင်ထဲမှာဘယ်လောက်ပဲ အေးအေးလမ်းနဲ့ကပ်လျက်မှန်ဘေးက ကိုမောင့်ရင်ထဲမှာတော့ ပူလောင်လို့နေပါတယ်။ ပူလောင်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ဒီကနေ့ကိုမောင်တစ်ယောက် အသည်းနင့်အောင်ချစ်ခဲ့ရတဲ့ကြည်ပြာတစ်ယောက် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်မှာဖြစ်လို့ပါ။ အတိတ်ကိုပြန်လည်တူးဆွရရင်ဖြင့် ကိုမောင်တစ်ယောက်ကြည်ပြာ့အဖေဦးမိုးမြင့်ရဲ့ေ ဆာက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှာ ဆိုဒ်မန်နေဂျာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတုန်း ကိုမောင်တို့ဆိုဒ်ထဲကို ကြည်ပြာတစ်ယောက်စာရင်းကိုင်နဲ့ ကျောင်းပြီးလို့သူ့အဖေက လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရအောင် လုပ်ခိုင်းရင်းစတင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာပါ။ လကုန်ရက်တစ်ရက်မှာစာရင်းတွေက တော်တော်ကွာနေတာမို့ကြည်ပြာနဲ့ကိုမောင်စာရင်းတွေ ဝိုင်းလုပ်ကြရင်းညနက်သွားပါတယ်။
ဒီတော့ကိုမောင်ကကြည်ပြာကို လိုက်ပို့ရင်းစတင်ရင်းနှီးခင်မင်သွားကြပါတယ်။ တစ်လလောက်လည်းကြာတော့ ချစ်သူဘဝရောက်ကြရပါတယ်။ ပိတ်ရက်မှာပန်းခြံသွားလိုက်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်နဲ့ချစ်သူတို့ဘဝအရသာကို ပျော်ပျော်ကြီးခံစားနေကြပါတယ်။ ကိုမောင်ကတော့ နောက်မှဦးမိုးမြင့်ကို ဖွင့်ပြောကာလက်ထပ်ကြမယ်လို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့အပျော်လေးတွေလေးလလောက်ပဲခံပါတယ်။ တစ်နေ့ဦးမိုးမြင့်က သူတို့နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သားနဲ့ ကြည်ပြာ့ကို လက်ထပ်ပေးဖို့ပြောဆိုကာ ရက်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာမို့ချစ်သူနှစ်ဦးငိုပွဲဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကိုမောင့်အနေနဲ့ကြည်ပြာ့ကို ခိုးပြေးရင်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဦးမိုးမြင့်ရဲ့ကျေးဇူးတွေက ကိုမောင်တို့မိသားစုဒီတစ်သက်မပြောနဲ့ နောင်ဘဝတောင်ဆပ်လို့မကုန်တာမို့ ကိုမောင်တစ်ယောက် ရင်နာနာနဲ့ပဲနောက်ဆုတ်ကာ ကျေးဇူးရှင်အလိုကျဘာမှမဖြစ်သလိုနေပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။ တစ်နေ့… ကြည်ပြာလက်ထပ်ဖို့ တစ်ပါတ်လောက်ပဲလိုတဲ့အချိန်မှာတော့ ကိုမောင်တစ်ယောက်ကြည်ပြာ့ကို ရင်ဆိုင်ဖို့စွမ်းအားမရှိတော့တာမို့ တိုက်ခန်းလေးထဲမှာပဲအရက်ကို အဖော်ပြုကာအသည်းကွဲနာကို အရက်နဲ့ကုစားနေပါတော့တယ်။ လက်ထပ်ဖို့၃ရက်လောက်ပဲလိုတဲ့နေ့ကြတော့ ဘဲလ်တီး သံကြားလို့ ကိုမောင်ထဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကြည်ပြာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အခန်းထဲရောက်တော့ကြည်ပြာက ‘မောင်..ကြည်ပြာ့ကိုစကားလေးဘာလေးပြောပါဦးလား။ ဒီလိုပဲအရက်တွေလှိမ့်သောက်နေတော့မှာလား။’ ‘မင်းပြန်ပါတော့ကြည်ပြာရယ်။ ငါ့ဖာသာတစ်ယောက်တည်းနေပါရစေ’ ‘ကြည်ပြာ့ကိုသေလောက်အောင်မုန်းသွားပြီလားမောင်။ သစ္စာမရှိတဲ့မိန်းမလို့ထင်သွားပြီလားဟင်.ပြောပါဦးမောင်ရဲ့’ ‘ဒီမယ်ကြည်ပြာ.မင်းကြောင့်ကွဲနေတဲ့ငါ့အသည်းကိုထပ်ပြီးဓားနဲ့မမွှန်းပါနဲ့တော့၊ ငါ့ကိုလည်းမေ့လိုက်ပါတော့ကွာနော်’ ‘မဟုတ်ဘုးမောင်. .မောင့်မှာအပြစ်မရှိပါဘူး၊ဒီကကြည်ပြာကသာသစ္စာမရှိတဲ့မိန်းမပါ၊’ ‘သွားပါတော့ကြည်ပြာရယ်။မောင့်ကိုထားခဲ့လိုက်ပါတော့ကွယ်။မင်းသာဘဝသစ်မှာ အဆင်ပြေပါစေလို့မောင်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ပြန်ပါတော့နော်’ ‘ပြန်ပါ့မယ်မောင်ရယ်။ဒါပေမယ့်ကြည်ပြာချစ်ရတဲ့မောင့်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လာနှုတ်ဆက်တာပါ’ လို့ပြောပြီးခြုံးပွဲချငိုလိုက်ပါတော့တယ်။ ကိုမောင်လည်းတစ်သက်လုံး ကိုယ်ဂရုတစိုက်ပျိုးလာတဲ့ပန်းကလေးသူများလက်ထဲပေးလိုက်ရတော့မှာမို့ ကြည်ပြာ့ကိုနှမြောတသစွာနဲ့ငေးကြည့်နေရာက ‘ကြည်ပြာ..မောင့်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့နမ်းခွင့်ပေးပါကွာ’ လို့ပြောကာကြည်ပြာ့ကိုအသာဖက်လိုက်ပြီးကြည်ပြာ့ပါးပြင်ကိုအနမ်းမိုးတွေရွာပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။
‘တော်ပြီမောင်ရယ်နော်ကြည်ပြာသွားရတော့မယ်’လို့ပြောလိုက်တော့မှာ ဆုံးရှုံးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသိလေးကဝင်လာကာကြည်ပြာ့မျက်နှာလေးကိုဆွေးမြေ့စွာကြည့်ရင်း ‘အရမ်းချစ်တယ်ကြည်ပြာရယ်’ လို့ပြောကာ ကြည်ပြာ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုဖိကာနမ်းရှိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ ကြည်ပြာကလည်းအလိုက်သင့်လေးပြန်ဖက်ရင်းကိုမောင့်အနမ်းတွေ ကိုအသာအယာခံယူနေပါတော့တယ်။နှုတ်ခမ်းလေးတွေကိုနမ်းနေရင်းစိတ်ကလည်းပါလာပြီမို့ ဘလောက်စ်ပါးပါးလေးဝတ်ထားတဲ့ကြည်ပြာ့ရင်အုံလေးကိုအသာလေးပွတ်သပ်ပေး လိုက်တော့ကြည်ပြာတစ်ယောက်အသက်ရှုသံတွေပါပြင်းလာပါတော့တယ်။ ချစ်သူဘဝတုန်းကလည်းစည်းမကျော်ခဲ့ကြတာမို့ကြည်ပြာတစ်ယောက်ချစ်သူကတစ်ဖက်၊ အသိစိတ်ကတစ်ဖက်နဲ့လွန်ဆွဲနေတုန်းကိုမောင်ကတော့ကြည်ပြာ့ဘလောက်စ်လေးကို အသာလှန်ကာရင်ညွန့်လေးကိုဖွဖွလေးစုပ်ပေးလိုက်၊ ဘရာပေါ်ကနေနို့အုံလေးကိုအသာလေးညှစ်ပေးလိုက်နဲ့ပေးနေတာမို့ ကြည်ပြာ့စိတ်တွေဘယ်လိုမှမတွန်းလှန်နိုင်ပဲကိုမောင့်ဘက်ကို သာလုံးလုံးပါသွားပါတော့တယ်။
ကိုမောင်ကကျောဘက်လေးကိုအသာပွတ်သပ်နေရင်းဘရာချိတ်လေးကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ဖြုတ်ချလိုက်ပါတော့တယ် ။နောက်တော့ရှေ့ဖက်ကိုလက်ကပြန် လာပြီးကျွတ်နေတဲ့ဘရာလေးကိုအသာပင့်တင်လိုက်ကာနို့သီးခေါင်းလေးတစ်ဖက်ကို ပါးစပ်ထဲငုံပေးလိုက်ချိန်မတော့.. ကြည်ပြာတစ်ယောက်’အိုး…မောင်ရယ်…’လို့ပဲပြောနိုင်ပါတော့တ ယ်။ကိုမောင်လက်တွေကတော့အငြိမ်မနေတော့ပဲဗိုက်သားလေးကို အသာပွတ်ပေးကာခပ်လျော့လျော့လေးဖြစ်နေတဲ့ ထမီလေးကိုချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့အတွင်းခံအပေါ်ကနေ လက်ခလယ်လေးနဲ့အထက်အောက်စုန်ချီဆန်ချီပွတ်ဆွဲပေးနေရင်း ပါးစပ်ကလည်းနို့နှစ်လုံးကိုအားနဲ့စို့ပေးလိုက်ရာ’ အိုး..လား..လား..မောင်ရယ်..ချစ်တယ်.’လို့ဆိုကာကိုမောင့်ခေါင်းကိုအတင်းဖက်ထားလိုက်ပါတယ်။ နို့ကိုအားရအောင်စို့ပေးပြီးနောက်ကိုမောင့်နှုတ်ခမ်းလေးကအောက်ဖက်ကို တရွေ့ရွေ့နဲ့ဆင်းလာကာချက်နားတစ်ဝိုက်ကို အသာဝိုက်ယက်ပေးလိုက်တော့ ကြည်ပြာ့ခါးလေးကော့တက် လာပါတော့တယ်။
ဒီအခါကိုမောင်ကကြည်ပြာ့ကိုယ်လေးကို ဆိုဖာပေါ်အသာလေးမှေးတင်လိုက်ရင်းအတွင်းခံလေးကိုချွတ်လိုက်ကာ ဒူးအထက်နားလေးကနေလျှာဖျားလေးနဲ့အထက်ကို တက်လာလိုက်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလိုက် ၊ပေါင်တွင်းသားလေးကိုယက်လိုက်နဲ့ကြည်ပြာ့ကာမခလုတ်တွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရာ ‘.အင်း..ဟင်း..ဟင်း..မောင်..’လို့ပြောကာမခံစားနိုင်တော့ပဲ ကိုမောင့်ခေါင်းကိုအရည်တွေရွှဲနေတဲ့စောက်ပတ်လေးကို အတင်းကိုင်ကာတေ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုမောင်ကလည်းအရင်တုန်းကမထိရက်မကိုင်ရက်တဲ့ချစ်သူရဲ့ရွှေကြုပ်လေးကို လျှာကြီးကို ထိုးထည့်လိုက်ကာ မက်မက်မောမောလေး အထက်ကနေအောက်ကို လေးငါးခါလောက်ပင့်ပေးလိုက်ရာ’ရှီး..အား..လား..လားမောင်..ဘာတွေလုပ်နေတာလဲကွယ်.’လို့ပြောကာ ကိုမောင့်ဆံပင်တွေကိုကျွတ်ထွက်မတတ်ဆွဲထားကာပါးစပ်လေးဟစိဟစိဖြစ်သွားပါတယ်။ ကိုမောင်ကအချစ်ရည်လဲ့နေတဲ့ကြည်ပြာ့စောက်ပတ်လေးထဲကိုလက်ခလယ်လေးထိုးထည့်ကာ သာသာလေးအပေါ်နားလေးကို အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးရင်းစောက်စိလေးကိုနှုတ်ခမ်းနှစ်ခု ကြားညှပ်ကာလျှာထိပ်ဖျားလေးနဲ့ပွတ်လိုက် ၊နို့စို့သလိုစို့ပေးလိုက်နဲ့လုပ်ပေးလိုက်ရာ ‘အ..အ..အ..မောင်..မရပ်လိုက်ပါနဲ့မောင်ရယ်..ဒီလိုလေးပဲဆက်လုပ်ပေးပါ’လို့ နှုတ်ကနေပါဖွင့်ပြောလာရတဲ့အထိဖီးလ်တက်လာပါတယ်။
လက်ကလည်းကိုမောင့်မျက်နှာနဲ့စောက်ပတ် ကွာကျသွားမှာစိုးတဲ့အလားအတင်းကိုဖိကပ်ထားရင်းကော့ပြန်လန်ကာငြိမ်ကျသွားပါတော့တယ်။ ဒီတော့မှကိုမောင်ကပြန်ထပြီးအရည်တွေပေနေတဲ့သူ့မျက်နှာကိုအနားကပုဆိုးနဲ့သုတ်လိုက်ပြီး သူ့ဖွားဖက်တော်ကြီးကို ကြည်ပြာ့စောက်ပတ်အဝလေးကိုတေ့လိုက်ကာစောက်စိနားတဝိုက် ကိုဒစ်ဖျားလေးနဲ့အသာရစ်ပေးလိုက်ရာ ‘အိုး..ဟိုး.. ဟိုးမောင်ရယ်ကြည်ပြာ့ကိုသေအောင်သတ်နေတာလားကွယ်’ လို့ မောဟိုက်သံလေးထွက်လာပါတယ်။ ကိုမောင်ကအသာလေးဒစ်ဖျားလေးမြုပ်အောင်သွင်းလိုက်ရင်းဖြည်းဖြည်းချင်း တစ်ရစ်ရစ်သွင်းပေးနေရာအမြှေးနေရာမှာခဏထောက်လာတော့ ‘အ..အ..အား..မောင်နာတယ်..နာတယ်ပြန်ထုတ်..လို့ဆိုကာကိုမောင့်ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့တွန်းထားပါတယ်။ လက်ကတာတွန်းနေတာပေါင်ကြီးနှစ်လုံးကတော့ပိုပြီးဝင်အောင်ကားသထက်ကားပေးနေပါတယ်။ ကိုမောင်ကသူ့လီးကြီးကိုအသာပြန်ထုတ်ကာအဝတေ့လိုက်ရင်းကြည်ပြာ့ပါးလေးကိုမွှေးလိုက်ရင်း’ကြည်ပြာ. နည်းနည်းလေးအောင့်ခံလိုက်နော်။အစမို့ပါနောက်ကျရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်’လို့ပြောလိုက်တော့ ကြည်ပြာကခေါင်းလေးညိတ်ကာအံကျိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ကိုမောင်ကလည်းအံကျိတ်ထားတဲ့ကြည်ပြာ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဖိစုပ်လိုက်ရင်း လက်တစ်ဖက်ကနို့အုံလေးကိုအားထည့်ညှစ်ပေးရင်းအဝတေ့ထားတဲ့လီးကိုခပ်ဆတ်ဆတ် လေးထိုးထည့်လိုက်ရာကိုမောင့်လီးရဲ့အရှိန်ကို မခံနိုင်ပဲအမြှေးလေးဖတ်ခနဲကွဲထွက်သွားကာအထဲကို တစ်တစ်ရစ်ရစ်ကြီးဝင်သွားပါတော့တယ်။ ကိုမောင်ကအသာလေးပြန်ထုတ်ပြီး တစ်ဝက်လောက်ပြန်ထုတ်ကာနည်းနည်းချင်းညှောင့်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။ ကြည်ပြာ့ခမျာရင်ထဲခိုက်ခနဲနာကျင်သွားတာမို့အားကုန်အော်ဟစ်ချင်ပေမယ့်၊ ကိုမောင်ကနှုတ်ခမ်းကိုအတင်းဖိကာစုပ်ထားတာမို့ အွန်း ဆိုတဲ့အသံကလွဲလို့ထွက်မလာပါဘူး။ ကိုမောင့်လက်တွေကလည်းနို့အုံကြီးကိုအတင်းညှစ်ပေးနေရင်း အောက်ကတစ်ချက်ခြင်းညှောင့်ပေးနေတာတွေကလည်းတရစ်ရစ်နဲ့ကောင်းလာတာမို့ ကြည်ပြာ့ခမျာနာကျင်တာရောကောင်းတာရောအရသာ၂မျိုးကိုပေါင်းစပ်ကာခံစားနေရပါတယ်။ ကိုမောင်ကလည်းအထဲကအရည်တွေနည်းနည်းလိုက်လာပြီမို့ လီးကိုအဆုံးအထိသွင်းလိုက်ရင်းမှန်မှန်လေးသွင်းပေးနေကာ ‘ကြည်ပြာ..ရရဲ့လား။’
‘အင်း’ ‘ဘယ်လိုနေလဲကောင်းလား’ ‘အထဲကနာတာတာအောင့်တောင့်တောင့်နဲ့’ ‘ကောင်းသွားမှာပါမောင်နည်းနည်းကြမ်းမယ်နော်’ ‘ဟုတ်’ကိုမောင်လည်းကြည်ပြာ့ပေါင်နှစ်လုံးကိုပုခုံးပေါ်ထမ်းတင်ရင်းအရင်ကထက်နည်းနည်းလေးအရှိန်ထည့်ကာ လုပ်ပေးလိုက်ရာမတော့ကြည်ပြာ့ခမျာနာကျင်မှုတွေပျောက်ပြီး အသည်းခိုက်အောင်ကောင်းလာပြီမို့ ‘အင်း..အင်း..ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ်..ကြည်ပြာ့ကိုမညှာပါနဲ့မောင်စိတ်ရှိသလောက်သာလုပ်ပါတော့ကွယ်။ ‘လို့ပြောလာရပါတော့တယ်။ ကိုမောင်လည်းရှိသမျှအားနဲ့ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးမနားတမ်းထိုးညှောင့်ပေးလိုက်၊ တစ်ချက်ချင်းမှန်မှန်လုပ်ပေးလိုက်နဲ့ ၅မိနစ်လောက်လုပ်ပေးနေရင်းဆတ်ကနဲတွန့်တက်သွားကာ သုက်ရည်များကြည်ပြာ့ထဲကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးလွှတ်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးအတန်ကြာဖက်ထားနေရင်းတပ်မက်စွာဖြင့်နှုတ်ခမ်းလေးကိုအတော်ကြာနမ်းရှိုက်နေကြ ပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးရင်ထဲမတော့နောက်တစ်ခါဆက်ပြီးခံစားဖို့ကိုပဲအာသီသတွေပြင်းပြနေကြပါတော့တယ်။ အဲဒီနေ့ကကြည်ပြာ့ကိုတစ်နေကုန်၃ချီလောက်လိုးပေးလိုက်ပြီး မိုးချုပ်ခါနီးမှကြည်ပြာတစ်ယောက်ကိုမောင့်တိုက်ခန်းကကွတကွတလေးနဲ့မပြန်ချင်ပြန်ချင်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်နေ့တွေလဲကြည်ပြာတစ်ယောက်အချိန်မှန်ကိုမောင်နဲ့လာကုန်းကာ မင်္ဂလာဆောင်မယ့်နေ့မတိုင်ခင်အထိလာတုန်းပါပဲ။ ကိုမောင်ကနောက်ပိုင်းထပ်ဆက်ချင်ရင်ရပေမယ့်သူတစ်ပါးမယားကိုတော့ကိုမောင်မမှားချင်တော့တာမို့ သိသိသာသာလေးပဲရှောင်နေလိုက်ပါတော့တယ်။
အတိတ်ကအရိပ်တွေကိုပြန်တူးဖော်ကြည့်ရင်းကိုမောင်တစ်ယောက် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတောင်ဂရုမစိုက်နိုင်ပဲဖြစ်နေတုန်း ‘အစ်ကိုဒီမှာလူရှိလား’..လို့မေးသံကြားမှ ဆတ်ခနဲအသိပြန်ဝင်လာရင်းခေါင်းမော့ကြည့်လိုက်တော့နေရာလွတ်မရှိလို့ ကိုမောင့်ရှေ့ကခုံမှာထိုင်မလို့ခွင့်တောင်းလာတဲ့လူငယ်စုံတွဲလေးတစ်တွဲ ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်တော့မှ.’.အော်ရပါတယ်ထိုင်ပါကိုအခုသွားတော့မှာ’ လို့ပြောရင်းထထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ လူငယ်စုံတွဲလေးကိုကြည့်ရင်းသူတို့အဖြစ်ကိုပိုသတိရသွားတာကြောင့် စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်စွာနဲ့ဆိုင်ပြင်ကိုထွက်လာရင်း ဆိုင်ဝအရောက်တစ်ဖက်ကနေဝင်လာတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုဝင်တိုက်မိလိုက်ပါတော့တယ်။’အို.. လို့ပဲအသံကြားလိုက်လို့ကြည့်လိုက်ရာလက်ထဲကအထုတ်တွေပြန့်ကျဲကာကောင်မလေးမှာ ဖင်ထိုင်လဲကျသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ ‘အို..ဆောရီး ပါဗျာ၊ကျွန်တော်မမြင်လို့ပါ’လို့တောင်းတောင်းပန်ပန်ဆွဲထူလိုက်ရာကောင်မလေးကမျက်နှာကိုမော့အကြည့်… ‘ဟာ.စုလေးပါလား’…စုလေးဆိုသည်မှာကိုမောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းက ပထမနှစ် ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ပါ ။နေ့စဉ်တွေ့မြင်နေကျဆိုတော့မေးထူးခေါ်ပြော အဆင့်လောက်သာမကအတော်လေးကို ခင်မင်ရင်းနှီးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
‘အော်..ဦးမောင်ပါလား။ရပါတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူး.ဒါနဲ့ဦးမောင်ဘာလာလုပ်တာလဲ’ ‘ဒီလိုပါပဲ။သိပ်တော့ထွေထွေထူးထူးမရှိပါဘူး။စုလေးရောမုန့်လာဝယ်တာလား။ ‘ဟုတ်တယ်။မနက်ဖြန်စုလေးမွေးနေ့လေ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်ဖို့ အချိုပွဲလာဝယ်တာပြီးရင်အအေးလေးဘာလေးသောက်ရင်းပြန်မယ်လေ’ ‘လာလေဒါဆိုဦးမောင်စုလေးပစ္စည်းတွေကူသယ်ပေးမယ်လေ။အခုတော့တစ်ခုခုသောက်ပါအုံး။ ဦးမောင်ကျွေးမယ်လေ’ ‘ကောင်းသားပဲ။ဒါနဲ့ဒီဆိုင်မှာလူပြည့်နေသလားလို့။’ ‘ရတယ်လေ။ဒါဆိုဆူးလေက အေရိုးမား သွားမလားဟိုမှာဆိုတော့အေးဆေးတယ်’ ‘ဟုတ်..သွားတာပေါ့မုန့်ဝယ်လိုက်အုံးမယ်’ လို့ဆိုကာနှစ်ယောက်သား အေရိုးမား ဘက်ကိုရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆိုင်မှာအအေးသောက်နေရင်းစကားလေးဘာလေးပြောကြတော့စုလေးက ‘ဦးမောင်..ဒီနေ့ပိတ်ရက်လေ.မမနဲ့လျှောက်မလည်ဘူးလား။’လို့မေးလိုက်ရာကိုမောင့်မျက်နှာသိသိသာသာလေး ညှိုးသွားပြီးအကြောင်းစုံကိုစုလေးအားရှင်းပြလိုက်ရာ.. ‘အို..စုလေးစိတ်မကောင်းပါဘူးဦးမောင်ရယ်.ဆောရီးနော်၊စုလေးကြောင့်ဦးမောင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားပြီ။’ ‘ရပါတယ်စုလေးရယ်။လောလောလတ်လတ်မို့ပါ။နောက်တော့နေသားကျသွားမှာပါ။’လို့ပြောရင်းတော်တော်န့ဲစကားမဆက်ဖြစ်ကြပါဘူး။အတော်လေးကြာတော့မှစုလေးက ‘ဦးမောင်..စုလေးကိုရုပ်ရှင်လိုက်ပြပါလား။ အခုတင်ထားတဲ့ကားကကောင်းမယ်ထင်တယ်’ ‘ရတယ်လေစုလေး’ လို့ဆိုကာနှစ်ယောက်သားရုပ်ရှင်ရုံဖက်ကူးလိုက်တော့လက်မှတ်ကောင်တာကကုန်သွားပြီဆိုတော့ ‘နေပါစေတော့ဦးမောင်ရယ်နောက်မှပဲကြည့်တော့မယ်’ ‘ခဏလေးနော်အပြင်ကမှောင်ခိုသမားတွေဆီမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်’ လို့ပြောကာအပြင်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တော့ လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပြေးလာပြီး ‘အစ်ကို.လက်မှတ်လား။အတွဲခုံကျန်သေးတယ်လေ။’နှစ်ယောက်တွဲခုံပဲရှိတော့ စုလေးတစ်ယောက်နေရခက်နေမှာစိုးလို့ ‘နေပါစေညီလေးရာမကြည့်တော့ပါဘူး’ ‘ယူပါအစ်ကိုရယ်။ပွဲကပြတော့မှာမို့ပါ။ကျွန်တော်လည်းဒါလေးရောင်းမထွက်ရင်ပိုက်မိမှာစိုးလို့ပါ။
ပိုက်မိရင်ညနေအိမ်ကိုဘယ်လိုပြန်ရမှန်းမသိလို့ပါ။ကျွန်တော်လျော့ပေးပါ့မယ်’ လို့တောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောလာတော့သနားတတ်တဲ့စုလေးက ‘ယူပေးလိုက်ပါဦးမောင်ရယ်ပြဿနာမရှိပါဘူး။’ဆိုတော့လက်မှတ်ဝယ်ပြီးရုံထဲဝင်လိုက်ပါတယ်။ ရုံထဲရောက်တော့စုလေးကနေကြာစေ့စားချင်တယ်ဆိုလို့ကိုမောင်တစ်ယောက်ဝယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စုလေးကနေကြာစေ့ကိုအခွံခွာကျွေးတော့။နေကြာစေ့မကြိုက်ပေမယ့်ကိုမောင်တစ် ယောက်အားနာနာနဲ့စားနေရပါတယ်။ စားနေရင်းသူနဲ့ကြည်ပြာတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပြန်သတိရလာရင်းမီးရောင် မှိန်မှိန်အောက်မှာစုလေးကိုကြည်ပြာလို့ပဲမြင်လာပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့်ကိုမောင်စားဖို့နေကြာစေ့ကို ကမ်းပေးလိုက်တဲ့စုလေးလက်လေးကိုအသာလေးအုပ်ကိုင်လိုက်ရာ’အို’ လို့တစ်လုံးသာရေရွတ်ပြီးစုလေးတစ်ယောက်မျက်နှာလွှဲသွားပါတယ်။ ဒီတော့ကိုမောင်တစ်ယောက်ရှက်သွေးလေးဖြာသွားတဲ့စုလေးကိုကြည့်ရင်း မချင့်မရဲလေးဖြစ်လာတာမို့လက်တစ်ဖက်ကစုလေးပုခုံးကိုဖက်၊ လက်ညှိုးလေးနဲ့စုလေးမျက်နှာလေးကိုအသာလှည့်လိုက်ရင်း’မင်းအရမ်းလှတာပဲစုလေးရယ်’လို့ ပြောကာဖွဖွလေးပါးကိုနမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။
‘စုလေးကလည်းရှက်ပြုံးလေးအသာပြုံးလို့ကိုမောင့်ရင်ခွင်ထဲအလိုက်သင့်လေးပါလာပါတော့ တယ်။…ကိုမောင်လည်းစုလေးကိုဖက်ထားရင်းကဆံပင်လေးကိုသပ်တင်လိုက်ရင်းနဖူးလေးကိုဖွဖွနမ်းကာ ‘စုလေး..သိပ်ချစ်တယ်ကွာ.ပြောပါအုံး..ဦးမောင်ကိုစိတ်ဆိုးနေလား။’ ‘မသိတော့ဘူးကွာစုလေးရင်တွေအရမ်းခုန်နေတယ်’ ‘ရင်တွေခုန်နေတယ်ဆိုတော့ဦးမောင်ကိုချစ်လို့ပေါ့၊’ ‘အင်း’ ‘မရဘူးချစ်တယ်လို့ပြော’ ‘အင်းပါဆို..ရှက်ရတဲ့အထဲဘာတွေလာမေးနေတာလဲကွာ’ ‘မဟုတ်ဘူးကွာစုလေးနှုတ်ကပြောတာကြားချင်လို့’ ‘စုလေးဦးမောင်ကိုချစ်ပါတယ်။စုလေးကမမကြည်ပြာအကြောင်းပြောကတဲကအရမ်းသနားနေတာ’ လို့ပြောကာကိုမောင့်ရင်ထဲပိုပြီးတိုးကပ်နေလိုက်ပါတော့တယ်။ ‘ဒါဆိုနမ်းမယ်နော်’ ‘ဟွန်ခုနလေးတင်နမ်းပြီးပြီမဟုတ်လား။ခွင့်လည်းမတောင်းပဲနဲ့သူဗိုလ်ကျတယ်’ ‘ခုနရိုးရိုး။အခုကရှယ်’လို့ပြောကာ စုလေးမျက်နှာလေးဆွဲမော့လိုက်ကာ တုန်ရီနေတဲ့နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို အသာလေးစုပ်ယူနမ်းရှိုက်လိုက်ရာအသားလေးတွေပါတုန်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ကိုမောင်လည်းနှုတ်ခမ်းလေးတွေကိုနမ်းနေရင်းကစုလေးပါးစပ်ထဲသူ့လျှာလေးထိုးထည့်ကာ စုလေးလျှာကိုပွတ်သပ်ပေးလိုက်တော့စုလေးလည်းကိုမောင်လုပ်သလို လျှာချင်းပြန်ပွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုမောင့်ကနှုတ်ခမ်းချင်းအသာပြန်ခွာလိုက်ပြီးလည်တိုင်လေးကိုနမ်းလိုက်ရာ ပုခုံးလေးတွန့်တက်လာပါတယ်။ လက်တစ်ဖက်ကလည်း စုလေးရင်သားလေးတွေကိုသာသာလေးပွတ်ပေးလိုက်ရာ ကျောလေးပါကော့သွားပါတယ်။
နောက်တော့တီရှပ်လေးကိုလှန်တင်လိုက်ပြီး ဘရာစီယာလေးကိုအသာပင့်တင်ကာလုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေးဖြစ်နေသောနို့အုံလေးကိုညှစ်လိုက်၊ လက်ညှိုးလက်ခညှပ်ကာနို့သီးခေါင်းသေးသေးလေးကို ပွတ်ခြေလိုက်နဲ့အစီအစဉ်ကျကျလုပ်ပေးလိုက်ရာငှက်ဖျားတက်သလို တဟင်းဟင်းနဲ့ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ကိုမောင်လည်းလည်တိုင်ကနေတောက်ရှောက်ဆင်းလာရင်း နို့အုံအောက်ခြေနားကနေလျှာပြားကြီးနဲ့ယက်တင်လိုက်ရင်းနို့သီးခေါင်းလေးကို ဖွဖွလေးငုံလိုက်ကာသာသာလေးစို့ပေးလိုက်တော့ ‘အိုး..ဟိုး.ဟိုး..အင်းယားတယ် ‘ လို့ဆိုကာတွန့်တက်သွားပါတယ်။ ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကလည်း ဒူးခေါင်းအထက်နားလေးကိုလက်ဖျားလေးနဲ့ရွရွလေးအပေါ်ကိုပွတ်ဆွဲပေးလိုက်၊ ပေါင်တွင်းသားလေးကို အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်နဲ့လုပ်ပေးနေရာစုလေးခမျာ ကိုမောင်ပြုသမျှနုနေရကာရမက်ဇောတွေထကြွလာပါတော့တယ်။
အပေါ်ကလည်းနို့သီးခေါင်းလေးကိုစို့လိုက် နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကြားညှပ်ကာလျှာဖျားလေးနဲ့ကလိလိုက်လုပ်နေရင်း ၊ အောက်ပိုင်းကစုလေးစောက်ပတ်ကိုမထိအောင်အနားတစ်ဝိုက်မှာပဲလက်နဲ့ ပွတ်သပ်ပေးနေရာစုလေးမှာမနေနိုင်တော့ပဲနေရာလေးပါလိုက်ရွှေ့ပေးနေပါတော့တယ်။ဒီတော့မှကိုမောင်က လက်ခလယ်လေးနဲ့အတွင်းခံပေါ်ကနေအပေါ်အောက်ကပ်ဆွဲပေးလိုက်ရင်း စုလေးနားသီးလေးကိုစုပ်ပေးလိုက်ရာအောက်ကစောက်ရည်လေးတွေတောင်တစိမ့်စိမ့်ကျလာရပါတော့တယ်။ စုလေးခမျာကိုမောင်ကလိတဲ့ဒဏ်ကိုတွန့်လိမ်နေအောင်ခံစားနေရင်းလက်ကလည်း ကိုမောင့်ကိုယ်တစ်လျှောက်မချင့်မရဲနဲ့ လျှောက်ပွတ်နေတာမို့ ကိုမောင်ကစုလေးလက်တစ်ဖက်ပိုပေါင်ကြားထဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စုလေးကလည်းကိုမောင့်လီးကြီးကိုလက်နဲ့ထိမိတော့ တစ်ချက်တွန့်သွားပြီးမဝံ့မရဲလေးဖြစ်နေတုန်း ကိုမောင်ကလုံခြည်လေးအသာလျှော့လိုက်ပြီး အတွင်းခံထဲကနေသူ့လီးကြီးကိုဆွဲထုတ်လို့ စုလေးလက်ကိုဆွဲကာကိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။
စုလေးလည်းအတန်တစ်လျှောက် လိုက်ကိုင်လိုက်အောက်ဖက်ကဂွေးဥနှစ်လုံးကို ပွတ်လိုက်နဲ့မလုပ်တတ်မကိုင်တတ်ဖြစ်နေတာမို့ ကိုမောင်က စုလေးလက်အတန်ကိုကိုင်နေတုန်း လက်ပေါ်ကိုအုပ်ကိုင်လိုက်ကာဂွင်းတိုက်သလိုလုပ်ခိုင်းလိုက်ရာစုလေးလည်း သဘောပေါက်သွားပြီးကိုမောင်ခိုင်းသလိုအတိအကျပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အတွင်းခံပေါ်ကနေပွတ်နေတဲ့ကိုမောင်ကလည်း ဘောင်းဘီအနားလေးကိုလက်ချောင်းလေးနဲ့အသာကော်တင်လိုက်ပြီး အရည်တွေစိုရွှဲနေတဲ့စုလေးစောက်ပတ်လေးကိုဖြည်းဖြည်း ချင်းပွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စုလေးတစ်ယောက်လည်းခါးလေးပါကော့လာပြီးလက်ကလည်း လီးတန်ကြီးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးကိုကိုင်ထားမိနေပါတယ်။ အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက်ကို တရွရွလေးပွတ်ပေးနေရင်းတစ်ချက်တစ်ချက်အစေ့လေးကိုပါ တိုက်ဆွဲသွားတာမို့စုလေးတစ်ယောက်ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တော့ပဲကိုမောင့်ပေါင်ပေါ်ကိုမျက်နှာမှောက်ကာကျ လာပါတော့တယ်။
အခုမှစဖြစ်တဲ့ချစ်သူလေးကိုမခိုင်းချင်ပေမယ့်လည်းကိုမောင်တစ်ယောက်လည်းအရမ်းဖီးတွေတက်လာလို့ လီးကိုင်ထားတဲ့စုလေးလက်ကိုယူကာလက်ချောင်းလေးကို ပါးစပ်ထဲထည့်ငုံပေးလိုက်ကာ စုလေးကိုလမ်းကြောင်းပြပေးလိုက်တော့စုလေးလည်း ကိုမောင်သူ့ကိုလီးစုပ်ခိုင်းတာပါလားဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီး ချက်ခြင်းပဲကိုမောင့်လီးကြီးကိုပါးစပ်ထဲငုံပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုမောင်ကလည်းစုလေးလက်ချောင်းလေးကိုငုံထားရင်း သူဖြစ်ချင်သလိုပုံစံလေးကို လက်ကနေတဆင့်သင်ပြပေးနေတာမို့စုလေးလည်းဆရာကောင်းတ ပည့်ပီပီ တသွေမတိမ်းလိုက်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စုလေးစုပ်လို့ပိုကောင်းသွားအောင်ကိုမောင်ကစောက်ပတ်ကိုကလိပေးနေတဲ့လက်ကိုပြန်ထုတ်လိုက်ပြီး စုလေးနောက်ဖက်ဖင်ကြားကနေပြန်ပြီး စအိုဝကနေစောက်စိလေးအထိတောက်လျှောက် လက်ခလယ်နဲ့ပွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စုလေးလည်းဖီးတက်လာပြီးကိုမောင့်လီးကိုပိုပိုပြီးစုပ်ပေးနေပါတယ်။ ကိုမောင်ကလည်းစုလေးစောက်ခေါင်းကျဉ်းလေးထဲကိုလက်ခလယ်ကို အသာလေးတစ်ဝက်လောက်သွင်းပေးရင်း ကလိပေးလိုက်ရာစုလေးမှာ ခါးလေးပါကော့ကျသွားပါတယ်။ ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော့စုလေးလည်းဖင်လေးတွန့်တွန့်ကာလီးကိုတအားစုပ်ယူ နေတာကြောင့် စုလေးပြီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကိုမောင်နားလည်လိုက်ပါတယ်။
တစ်ချိန်ထဲမှာပဲကိုမောင်လည်းဘယ်လိုမှတောင့်မခံနိုင်တော့ပဲ စုလေးပါးစပ်ထဲမှာပဲပြီးသွားတာမို့စုလေးခေါင်းကို တင်းတင်းကြီးကိုင်ထားကာအတင်းဖိကပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ စုလေးခမျာကိုမောင့်သုက်ရည်တွေက အာခေါင်ထဲကိုတစ်ရှိန်ထိုးဝင်လာတာမို့အတော်အတန်မျိူချမိပါတယ်။ ညှီစို့စို့ငန်မျမျအနံ့ကြောင့်ပြန်ထွေးထုတ်ခြင်ပေမယ့် ကိုမောင်ကခေါင်းကိုအတင်းဖိကပ်ထားတာမို့အားလုံးပဲမျိုချလိုက်ရပါတော့တယ်။ အားလုံးအဝတ်တွေပြန်ပြင်ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်လည်းပြီးခါနီးနေပါပြီ။နှစ်ယောက်သားအိမ်ပြန်လာကြရင်း လှေကားရောက်တော့ အနမ်းလေးပေးကြရင်း ‘စုလေး..ဒီညတွေ့လို့ရမလား’ ‘ဘယ်လိုတွေ့မှာမို့လဲ’ ‘မီးသတ်လှေကားကနေကူးလာမယ်လေ’ ‘သတိလဲထားနော်၊ပြုတ်ကျနေအုံးမယ်’ ‘ဘယ်လိုလဲဒီညဖြစ်မှာလား’ ‘အိုမရသေးဘူးလေမနက်ဖြန်မှလာခဲ့၊မနက်မွေးနေ့ဆိုတော့လူကြီးတွေအိပ်ကြမှာမဟုတ်ဘူး’ ‘အော်ဟုတ်သား’ လို့ဆိုကာစုလေးပါးလေးကို နမ်းလိုက်ရင်း လက်ကလည်း အဖုတ်လေးကိုကုတ်လိုက်ပါတယ်။ ‘သွား..လူဆိုးညစ်တီးညစ်ပတ်’ လို့ဆိုကာကိုမောင့်ကျောကို အုန်းခနဲထုလိုက်ပါတယ်။ ကိုမောင်လည်းစုလေးကိုနောက်တစ်ခါကုတ်မလို့လုပ်တုန်း စုလေးကအတင်းတက်ပြေးသွားပါတယ်။ ‘စုလေးနေအုံးမနက်ဖြန်ညကျလူကြီးတွေအိပ်ရင်ဖုန်းဆက်လိုက်နော်’ လို့ပြောရာစုလေးကခေါင်းလေးကိုညိတ်ပြလိုက်ပါတယ်။
နောက်တနေ့ညရောက်တော့ ကိုမောင်တစ်ယောက် ကြက်ဥနဲ့ငှက်ပျောသီးကိုစားကာ အိပ်ယာပေါ်ပက်လက်လှန်ရင်း စုလေးဆီကဖုန်းကိုမျှော်နေမိပါတော့တယ်။ ဆယ်နာရီခွဲလောက်ကျတော့ ဖုန်းမြည်လာပါတယ် ‘မောင်လား’ ‘လာလို့ရပြီလား’ ‘ဟုတ်’ လို့ပြောကာဖုန်းချသွားပါတယ်။ကိုမောင်လည်းမဆိုင်းမတွ နောက်တံခါးကိုဖွင့်ကာ မီးသတ်လှေကားကနေစုလေးတို့အခန်းဘက်ကိုကူးလာပါတယ်။စုလေးကတံခါးဝကနေ စိုးရိမ်တကြီးမျက်နှာလေးနဲ့လာကြိုနေပါတယ်။အုအခန်းထဲကိုခေါ်သွားပါတော့တယ်။ အခန်းထဲရောက်တော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမလွတ်တမ်းဖက်ထားကြရင်း။ ‘သတိရလိုက်တာစုလေးရယ်’ ‘အတူတူပါပဲမောင်ရယ်။စုလေးလည်းသတိရပါတယ်။’ ‘ဒါဆိုရင်ချစ်ကြရအောင်နော်’ လို့ပြောပြောဆိုဆို ကိုမောင်တစ်ယောက်စုလေး နှုတ်ခမ်းလေးကိုစုပ်ပေးလိုက်ရင်း လက်ကလည်းအဝတ်အစားတွေကိုချွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စုလေးကလည်း အလိုက်သင့်လေးကူချွတ်ပေးပါတယ်။မှိန်ပျပျညမီးရောင်အောက်မှာ စုလေးတစ်ယောက်အဝတ်အစားမပါပဲလှချင်တိုင်းလှနေတာတွေ့တော့ ကိုမောင်တစ်ယောက် အသည်းတွေယားလာပြီး စုလေးကိုပွေ့ချီကာ ခုတင်ပေါ်အသာလေးတင်လိုက်ပါတယ်။ စုလေးလည်း ချစ်သူကိုမိမိပန်းဦးလေးကိုပေးရတော့မှာမို့ ရင်တွေဖိုလာပြီးမျက်လုံးလေးကိုအသာမှိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ကိုမောင်ကစုလေးအပေါ်ကနေအုပ်မိုးလိုက်ရင်း စုလေးနှုတ်ခမ်းပါးလေးကို ဖိကပ်နမ်းရှိုက်လိုက်ပါတယ်။စုလေးကလည်းအားကျမခံ ကိုမောင့်အနမ်းလေးတွေကို တုံ့ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုမောင့်လက်ကလည်း စုလေးနို့အုံလုံးလုံးလေးကို အသာလေးညှစ်လိုက် နို့သီးခေါင်းလေးကိုပွတ်ပေးလိုက်နဲ့လုပ်ပေးနေတာမို့ စုလေးတစ်ယောက်အောက်မှာတွန့်လိမ်လို့နေပါတယ်။ နောက်တော့လည်တိုင်လေးကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေးစုပ်ယူလိုက်ရင်း အောက်ကိုနိမ့်ဆင်းလာကာ နို့အုံလေးကိုသူ့လျှာကြမ်းကြီးနဲ့သိမ်းယက်ပေးလိုက်ရာ စုလေးမှာတွန့်တက်သွားပြီး ကိုမောင့်ခေါင်းကိုအတင်းဖက်ထားပါတယ်။ ကိုမောင်ကလည်းနို့သီးခေါင်းသေးသေးလေးတွေကို အသာစို့ပေးလိုက်ရင်း လက်ကဗိုက်သားလေးတွေကိုတရွရွနဲ့ပွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့အောက်ကိုဆင်းပြီး စုလေးစောက်ပတ်လေးကို လက်ဝါးလေးနဲ့ခပ်ဖွဖွလေးအုပ်ကာပွတ်ပေးလိုက် ၊ ပေါင်တွင်းသားလေးကိုပွတ်ပေးလိုက်နဲ့မို့စုလေးလည်း ရမက်တွေကြွလာပါတယ်။ပါးစပ်ကလည်း ငှက်ဖျားတက်သလိုတဟင်းဟင်းနဲ့ဖြစ်လာပါတယ်။ ကိုမောင်လျှာကြီးကလည်း အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆင်းလာပြီး ချက်နားတစ်ဝိုက်ရစ်ဆွဲပေးလိုက်ရင်း ပေါင်ခြံနားရောက်တော့ စောက်ပတ်ကိုမယက်သေးပဲ ပေါင်တွင်းသားလေးတစ်လျှောက် စုန်ချီဆန်ချီယက်တင်ပေးလိုက်ရာ စုလေးမှာ ပိုပြီးမရိုးမရွတွေဖြစ်လာကာ ကိုမောင့်ခေါင်းကိုသူ့စောက်ပတ်နဲ့တည့်အောင်အတင်းဆွဲကပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့မှကိုမောင်လည်း စုလေးတင်ပါးအောက်ကိုခေါင်းအုံးလေးခံပေးလိုက်ရင်း စအိုဝလေးကနေစောက်စေ့လေးအထိတောက်လျှောက် လျှာပြားကြီးနဲ့သိမ်းယက်ပေးလိုက်ရာ ‘ရှီး…လား…လား….လား…မောင်ရယ်’ ကိုမောင်လည်းအချက်နှစ်ဆယ်လောက် ဆက်တိုက်အပေါ်အောက်ဆွဲပေးလိုက်ရင်း လက်ခလယ်လေးနဲ့စုလေးစအိုဝကို မထိတထိလေးပွတ်လိုက်ရင်း လျှာက်ိုစောက်ခေါင်းထဲထိုးသွင်း ပေးလိုက်ရာ စုလေးမှာကော့ပြန်လန်နေပါတော့တယ်။
ကိုမောင်လည်း စောက်ခေါင်းထဲမှာ အားရအောင်လုပ်ပေးပြီးနောက် လက်ခလယ်ကို စောက်ခေါင်းထဲထိုးသွင်းပြီး လျှာကလည်းစောက်စေ့တစ်ခုတည်းကိုသာဦးစားပေးယက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။အောက်ကစုလေးလဲဖီးတွေအရမ်းတက်လာပြီး စောက်ပတ်နဲ့ကိုမောင့်မျက်နှာကွာသွားမှာစိုးတဲ့အလား ကိုမောင့်ခေါင်းကို အတင်းဖိကပ်ထားပါတယ်။ငါးမိနစ်လောက်လုပ်ပေးလိုက်တော့စုလေးတစ်ယောက် ကော့တက်လာကာငြိမ်ကျသွားပါတယ်။ ကိုမောင်ကခဏလေးစောင့်လိုက်ပြီး ပေါင်ကြားထဲဝင်ထိုင်လိုက်ကာ ပြူထွက်နေတဲ့စုလေးစောက်ပတ်အဝလေးမှာ ဒစ်ဖျားလေးကိုတေ့ပြီး အထဲကိုမသွင်းသေးပဲ စောက်စေ့လေးကိုကော်ထိုးကာပွတ်ပေးလိုက်တော့ ‘အား..မောင်ရယ်ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲ၊စုလေးကိုနေရခက်အောင်လုပ်နေတာလား’ ကိုမောင်လည်းစုလေးတစ်ယောက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာသိလိုက်ပြီး လီးတန်ကြီးကိုလက်နဲ့ကိုင်ကာ စုလေးစောက်ပတ်ဝကိုသေချာချိန်ရင်း ဒစ်ဖျားလေးမြုပ်အောင်သွင်းကြည့်လိုက်ရာ ‘အား..နာတယ်မောင်ရယ်..မရဘူးထင်တယ်’ ‘ပြန်ထုတ်လိုက်ရမလား’ ‘ဖြည်းဖြည်းသွင်းကြည့်လေနာရင်တော့မနေတော့ဘူး’ လို့တုန်ရီသံလေးနဲ့ပြောလိုက်တော့ ကိုမောင်တစ်ယောက် စုလေးနှုတ်ခမ်းလေးကိုအသာလေးဖိစုပ်လိုက်ရင်း လက်ကလည်းနို့အုံလေးကိုခြေပေးလိုက် လုပ်ပေးနေရင်း ဒစ်ဖျားလေးဝင်နေတဲ့လီးကို တဖြည်းဖြည်းသွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။စုလေးလည်း နာကျင်လွန်းလို့ကိုမောင့်ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့တွန်း ထားလိုက်ပါတယ်။
ကိုမောင်ကလည်း အခြေအနေကိုသိတာမို့ အကုန်မသွင်းသေးပဲတစ်ဝက်လောက်ပဲသွင်းရင်း ဝင်သွားသလောက်လေးပဲ အသာလေးညှောင့်ပေးနေကာ စုလေးတစ်ယောက် အတော်လေးကိုကောင်းလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုမောင်လည်းစုလေးပါးစပ်ကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ပိတ်လိုက်ရင်း လက်ကျန်တစ်ဝက်ကိုအားထည့်ကာထိုးသွင်းလိုက်တာမို့ အမှေးပါးလေးကိုပါထိုးဖောက်ပြီး စောက်ခေါင်းကျဉ်းလေးထဲ အပြည့်အသိပ်ဝင်သွားပါတော့တယ်။ စုလေးခမျာ အသည်းခိုက်လောက်အောင်နာကျင်သွားတာမို့ အားကုန်အော်ပစ်လိုက်ချင်ပေမယ့်လည်း ကိုမောင်ကပါးစပ်ကိုပိတ်ထားတာကြောင့် အသံမထွက်လာခဲ့ပါဘူး။ကိုမောင်သာပိတ်မထားရင် စုလေးအော်သံကြောင့်တစ်အိမ်လုံး နိုးသွားမှာအသေအချာပါပဲ။ကိုမောင်က တစ်ချက်ခြင်းမှန်မှန်လေးသွင်းပေးနေရင်း ‘စုလေးအဆင်ပြေလား’ ‘အထဲကအရမ်းနာတယ်၊စပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့အောင့်လည်းအောင့်တယ်။’
‘နောက်တော့ကောင်းလာမှာပါကလေးရယ်’ လို့ပြောရင်းပါးစပ်ကလည်းစုလေးနှုတ်ခမ်းကို အတင်းဖိစုပ်၊လက်တစ်ဖက်ကလည်းနို့ကိုခပ်နာနာလေး ညှစ်ပေးလိုက် အောက်ကလည်း နည်းနည်းမြန်မြန်လေးလုပ်ပေးလိုက်နဲ့မနားတမ်း လုပ်ပေးလိုက်ရာ ၊ စုလေးမှာ နာကျင်မှုတွေပျောက်သွားပြီး တစ်စတစ်စအရသာတွေ့လာကာ အောက်ပိုင်းကလည်းကိုမောင်လုပ်လို့ ကောင်းအောင် နေရာတွေပါလိုက်ပြင်ပေးနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်း အပေးအယူမျှလာရင်း ‘စုလေး..ကောင်းလား’ ‘အင်း’ ‘ဒါဆိုနည်းနည်းထပ်ကြမ်းမယ်နော်’ ‘သနားပါအုံးမောင်ရယ်ကွဲထွက်ကုန်ပါ့မယ်’ ‘ကွဲမထွက်ပါဘူး၊နောက်တော့မှမကြမ်းရင်မချစ်ဘူးဖြစ်နေမယ်’ ‘သဘောတော်အတိုင်းပါပဲရှင်’ လို့ပြောကာကိုမောင့်ခေါင်းကိုဆွဲရင်း အားရပါးရနမ်းနေပါတော့တယ်။ ကိုမောင်လည်း စုလေးခြေထောက်တွေကို ပုခုံးပေါ်ထမ်းလိုက်ရင်း အားရပါးရမီးကုန်ယမ်းကုန်ဆောင့်ဆောင့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ ‘အား…အား…အား..ဆောင့်..ဆောင့်…မောင်…စုလေးကိုမညှာနဲ့..မောင်အားရအောင်လုပ်နော်’ ကိုမောင်လည်းအချက်သုံးရာလောက်မနားတမ်းဆောင့်ပေးလိုက်ရင်း သုက်ရည်ပူများကိုစုလေးစောက်ခေါင်းထဲပန်းထည့်လိုက်ပြီး စုလေးဗိုက်ပေါ်ကိုမှောက်ကျသွားပါတော့တယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တင်းကြပ်စွာဖက်ထားလိုက်ရင်းက ‘စုလေး.မောင်စုလေးကိုအရမ်းစွဲသွားပြီကွာ.မောင်ညတိုင်းလာမယ်နော်’ ‘လာပါမောင်ရယ်..စုလေးလည်းမောင့်ကိုအရမ်းခိုက်သွားပါပြီ’ ‘သိပ်ချစ်တာပဲစုလေးရယ်..တကယ်တော့စုလေးဟာ..ပထမဆုနဲ့လွဲခဲ့တဲ့မောင့်အတွက် နှစ်သိမ့်ဆုလေး ပါကွယ်’ လို့ပြောရင်းစုလေးနှုတ်ခမ်းလေးကိုဖိကာ နမ်းရှိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ စုလေးကလည်း အလိုက်သင့်ပြန်နမ်းပေးလိုက်ရင်း နှစ်ယောက်သားနောက်တစ်ခါလိုးကြဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေကြပါတော့တယ်။အဲဒီညက ကိုမောင်တစ်ယောက်စုလေးအခန်းကနေ မိုးလင်းခါနီးမှပြန်သွားပါတယ်။စုလေးမှာလည်း နောက်တစ်နေ့ အိပ်ယာထဲကနေတောင်မထနိုင်လောက်အောင်ပဲ ကိုမောင်တစ်ယောက်ပွဲကြမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပဲအလျင်းသင့်သလို ကိုမောင်နဲ့စုလေးတို့ ညတိုင်းနီးပါးလိုးနေကြရင်း တစ်လလောက်ကြာတော့ စုလေးမိဘတွေမိသွားတာကြောင့် ကိုမောင်တို့နှစ်ယောက်ယူလိုက်ကြပါတော့တယ်။ စာကြွင်း။ ။ကျွန်တော်တို့ဇာတ်လိုက်ကြီးကိုမောင်နဲ့စုလေးတို့ဟာ အခုအခါမှာ ကျောက်မြောင်းထဲမှာ ကလေးတောင်သုံးယောက်ရနေပြီး ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဆက်လက်ပေါင်းသင်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျား။ ။ ..ပြီးပါပြီ.